Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Une mitoro zvaungasarudza kana wafunga sei kufamba. Kufanana zita yakakurumbira firimu, unogona kuenda Via ndege, nezvitima, uye nemotokari. Kana totaura achitora tichiona Italy, zvisinei – there are some definite perks to going by…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Paris uye Roma vari pamusoro anenge ose mufambi wacho bhakiti mazita. Maguta aya kunoshamisa dzakakurumbira kuti tsika dzavo, nyika-kirasi chili, nemasango akitekicha uye zvakawanda. Apo Roma uye Paris vari kure nakure, vari kwazvo zvakabatana nechitima. This means…